Vaovao - Handresy ny sakana ara-teknika momba ny plastika tsy misy poizina maitso
Ny sakana ara-teknika sy ny fetrany ankehitriny amin'ny fampandrosoana indostria dia matetika sarotra tapahina, ary toy izany koa ny vokatra plastika any Shina. Ahoana no fomba hahatratrarana maitso tsy misy poizina, ny fomba handresena ireo sakana ara-teknikan'ny plastika tandrefana no ifantohan'ny fikarohana indostrialy Vaovao farany izay dia tonga ny vaovao tsara fa ny Oniversiten'i Zhengzhou dia namorona plastika maitso tsy misy poizina, izay hitondra tombony amin'ny fonosana sakafo amin'ny vokatra plastika any Shina.
Ny firenentsika mandresy plasticizer sakana ara-teknika tsy misy poizina plasticizer fonosana ho avy
Notarihin'ny Profesora Liu Zhongyi avy amin'ny The School of Chemistry and Molecular Engineering of Zhengzhou University, ny ekipa mpikaroka siantifika The Green Catalytic Process an'ny The Education Department of Henan Province, taorian'ny fikarohana nandritra ny herintaona mahery, dia nahatratra ny tsy fahapoizinana. ny plastika phthalic ao amin'ny laboratoara, ary ny fahombiazan'ny vokatra dia nahatratra ny fenitra Eoropeana ho an'ny plastika mitovy amin'izany, ary efa hiditra amin'ny fitsapana piloto. Aorian'ny famokarana betsaka, antenaina fa hahatsapa vokatra feno poizina feno plastika amin'ny maro saha any Sina.
Araka ny fampidirana azy dia ny plastika o-benzene no be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ny fanodinana plastika betsaka indrindra, ny famokarana simika ny fanampiana, be mpampiasa amin'ny plastika, rubber, adhesives, cellulose, résin, fitaovana fitsaboana, tariby ary vokatra hafa .Na izany aza, ny firafitry ny peratra benzena amin'ny plastika phthalika dia manimba ny olombelona, ​​ny biby, ny zavamaniry ary ny tontolo iainana, indrindra amin'ny rafitra fiterahana olombelona. Vokatr'izany, ny Eu dia nandray torolàlana tamin'ny faran'ny taona 2005 mandràra ny fampiasana phthalates amin'ny vokatra ho avy. mifandray akaiky amin'ny vatan'olombelona, ​​toy ny sakafo, fonosana ara-pahasalamana ary kilalao ho an'ny ankizy. Nanomboka tamin'ny 2011, firenena maro, anisan'izany i Shina, no nametraka fenitra mitovy amin'ny EU. Ireo vokatra plastika tsy misy poizina any amin'ny firenentsika dia maika tokoa.
Vokatr'ity fikarohana ity dia tsapa tsikelikely ny indostrialy ary ho tapaka ny sakana ara-teknika sy ny fenitra henjana an'ny UE. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny famokarana mpamokatra anatiny, andrasana ny vidin'ny plastika maitso tsy misy poizina raha mitontongana be dia be, ny indostria rehetra any ambany, anisan'izany ny mpanjifa tsotra dia hahazo tombony amin'izany.